Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku eg – Kalfadhi
Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ku eg
MUQDISHO, 10 JAN 2019 (KALFADHI)-Waxaa maanta oo 10ka bisha January ah ku eg Kalfadhiga 4aad Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya sida ku cad Xeer hoosaadka Baarlamaanka.
Xeer hoosaada Golaha Shacabka ayaa dhigaya in Baarlamaanka sanadkiiba ay shiraan Sideed bil. Sidoo kalane ay fasax galaan Afar bil si ay usoo nastaan booqashana ay ku aadaan degaanadii laga soo doortay.
Kalfadhigaan ayaa furmay 10kii bishii sagaalaad ee September. waxaana lagu waday inuu soo xermo maanta oo 10ka bisha January ah taas oo u dhiganta in kulanka uu socday Afar biloood oo dhameestiran. Ma jirto wax dhaq dhaqaaq ah oo muujinaya in maanta ama berri uu Baarlamaanka kulan yeesho.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa Kalfadhi u sheegay in maanta ay aheyd xeritaanka Kalfadhiga 4aad ee Golaha Shacabka oo maalmihii la soo dhaafay uu ragaadiyay Khilaaf iyo kulamadii oo aan qabsomin. Xildhibaanka ayaa sheegay iney aysan wax dhib ah laheyn hadii ay maalmo kooban ku darsanto Kalfadhiga.
“Maalin iyo wax lamid ah dhib maleh waxaan fileynaa in maalinta sabtida uusoo xermo Kalfadhiga”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Dalxa.
Kalfadhigii 3aad ee Golaha Shacabka ayaa sanadkii hore lagu soo xiray wareegto ka soo baxday Xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo markaas xilka ku cusbaa. Arintaas ayaa dhalisay doodo iyo mugdi soo kala dhax-galay labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay aheyd in mar qura la xero. SIdoo kalane halmar lawada furo.
Khilaafkaas ayaa saameeyay furitaanka Kalfadhigaan oo ay labada Gole kala qabsadeyn laba Xaflad oo fadhiga lagu furayay. Wali waxaa taagan Khilaafkii maalintaas soo bilaawday sida uu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan.
“Way aheyd iney isla shaqeeyaan labada Gole ee Baarlamaanka sanadkiina ay fariistaan laba Kalfadhi oo sideed bil”, Ayuu yiri Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa qaba in dib u dhaca xeritaanka Kalfadhigaan 4aad ay sabab u tahay Jahwareerkii siyaasadeed ee la galay iyo Khilaafka soo cusboonaaday ee u dhaxeeya labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku mashquulsan yihiin Guddoonka.
“Sidaa ogtahay waxaa iska jira khilaaf ku soo laa-laabtay Baarlamaanka amuurahaas ayaa dib u dhigi kara waana filayaa in todobaadkaan la soo xero”, ayuu markale u sheegay Kalfadhi Xildhibaan Dalxa.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay iney suurtagal tahay in fadhiga Baarlamaanka uu qabsoomo maalinta sabtida ee 12ka bishaan islamarkaana la soo xero Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Soomaaliya maadaama waqtigii la dhaafay.
Labadii Kalfadhi ee ugu dambeysay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ee kala ahaa 3aad iyo 4aad ayaa lagu tilmaamay iney ahaayeen kuwii ugu shaqada yaraa Baarlamaanka. Kalfadhiyadaan ayaa waxaa ragaadiyay Khilaaf soo kala dhax-galay Guddoonka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo soo xiray Kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Aqalka Sare.